Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်တော်တဲ့ Laptop တစ်လုံးဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
by Crisis Core | Oct 25, 2017 | Developer, Laptop |0comments
Fresher Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ Code ရေးဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ Laptop တစ်လုံးရွေးချယ်ဝယ်ယူရတာ ခက်ခဲတဲ့ပြသနာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ် Brand ဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ ဘယ် Model ဝယ်ရင်ကောင်းမလဲလေ့လာရင်းနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ Specifications တွေကြောင့် ခေါင်းရှုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ Laptop တော်တော်များများပေါ်မှာ Code ရေးနိုင်ပေမယ့် သင်အသုံးပြုမယ့် Laptop ဟာ သင်အသုံးပြုမယ့် IDE တွေ Application တွေအတွက်လိုက်ဖက်မယ့် Specifications တွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါက သင့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားတိုးတက်စေနိုင်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်ကိုလဲပိုရလာစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးတဲ့ Programming Language ၊ ကိုယ် Specialize လုပ်တဲ့ Developmentပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုရမယ့် Tools တွေလဲကွဲပြားသွားပါလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် Developer တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီသော Development Machine ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်ယခုအကြံပြုပေးမှာကတော့ Web Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ Professional Career အဖြစ်အသက်မွေးမယ့် Fresher လေးတွေ Laptop တစ်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ အဓိက Development Machine အနေနဲ့သုံးမယ့်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး အကြံပြုပေးထားပါသည်။
သင် Web Development အတွက် Laptop တစ်လုံး ဝယ်ယူတော့မည်ဆိုပါက စဉ်းစားရမည့်အချက် ၉ ချက်ရှိပေသည်။
၃) Processing Power ( CPU )
၄) Memory ( RAM )
၅) Storage Type and Capacity
၈) Operating System
၉) Dedicated or Integrated Graphic?
Laptop တော်တော်များများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုး ၊ စတိုလ်အမျိုးမျိုး ၊ အလေးချိန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုး Laptop ကို Primary Development Machine အနေနဲ့ အသုံးပြုမှာဖြစ်သည့်အတွက် သင်ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည့်အချက်သည် သင့်အတွက်ဘယ်လောက်သယ်ဆောင်ရအဆင်ပြေစေသလဲ ဆိုတာပင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကအပြင်မသွားဘူး အိမ်မှာပဲသုံးတာများရင်တော့ 15″ Laptop ကသင့်အတွက်အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ 15″ Laptop တွေက Screen ပိုကြီးတဲ့အတွက် Multitasking လုပ်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုပိုအဆင်ပြေစေပြီးတော့ Specification အနေနဲ့လည်းပိုကောင်းတဲ့ Specification တွေရစေနိုင်ပါတယ်။
မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကအပြင်လဲခဏခဏသွားတယ် ခရီးလဲခဏခဏထွက်ရလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ 13” သို့မဟုတ် 14” Laptop တွေက သင့်အတွက်အဆင်ပြေစေနိုင်ပြီးတော့ Battery Life အနေနဲ့လဲ 15” Laptop များထက်ပိုကြာရှည်ခံပါလိမ့်မယ်။
2 in 1 Laptop ရောအဆင်မပြေဘူးလားဆိုရင်.. Touch Screen အတွက်ကိုယ်ပိုပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ပြန်ရလိုက်တဲ့ Touch Screen feature က ကိုယ်ရေးမယ့် Development Tools အတွက် ထူးထူးခြားခြား မထူးခြားသွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတော့ Touch Screen Laptop တွေကိုမဝယ်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။
Programmer တွေအတွက် Laptop Screen ဆိုတာအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Laptop Screen ကိုအကြာကြီးကြည့်ရတဲ့ Programmer တွေအတွက် Laptop Screen မကောင်းရင်ကိုယ့်မျက်စိ ကိုယ်ပြန်ရောဂါပေးသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့် Screen ကောင်းမွန်တဲ့ Laptop ကိုပဲရွေးဝယ်စေချင်ပါတယ်။
သာမာန်စျေးသက်သာတဲ့ Laptop တော်တော်များများဟာ 1366x768 resolution နဲ့လာတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့ resolution ဟာသာမာန်ရွက်ကြမ်းရေကျိုမျှသာရှိပါတယ်။နောက်ပြီး Multitasking လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်စာဖတ်တဲ့အခါမှာလဲ စာလုံးများဟာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသိပ်မရှိစေပါဘူး။
4K Display လောက်ကျပြန်တော့လဲ Laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ Over ဖြစ်လွန်းအားကြီးတဲ့အပြင် ကိုယ်ကပိုက်ဆံတတ်နိုင်သည့်တိုင်အောင် ထို 4K Display ကသင့် Laptop ရဲ့ Battery အားကိုကြာရှည်ခံစေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဝယ်မည့် Laptop သည် 1920 x 1080 (1080p) Resolution ထက်မနဲပါစေနဲ့ ငွေနဲနဲထပ်စိုက်ပါက 1920 x 1080 (1080p) reslotion ရမည်ဆိုလျှင် မနှမြောပဲထပ်စိုက်ပြီး 1080p Display Laptop ကိုဝယ်လိုက်ပါ။
နောက်ပြီး သင့် Display သည် မည်သည့်ထောင့်မှကြည့်ကြည့် မှန်ကဲ့သို့ အလင်းမပြန်နေသော ဖြူစုတ်စုတ်ဖြစ်မနေသော IPS Display မျိုးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
3. Processing Power (CPU)
သင့်ဝယ်ယူမည့် Laptop ထဲတွင်ပါဝင်သော CPU သည် သင့် Laptop ရဲ့ Performance အတွက်အရမ်းအရေးကြီးလှသဖြင့် CPU ကိုသေချာရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်လှပါသည်။ CPU ဝယ်ယူလျှင် အရေးကြီးသောအချက်အလက်အချို့မှာ ထို CPU ၏ Cache size , Number of cores , frequency and thermal design power တို့ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် Intel core i5 , i7 with frequency 3GHz (သို့) 3GHz ထက်များသော CPU များသည် Programmer တော်တော်များများနှင့်အဆင်ပြေစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။
မည်သည့် Programming မဆို RAM 4GB ထက်နဲသော Laptop ပေါ်တွင်အဆင်ပြေပြေ Run နိုင်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ကျွန်တော့် ထောက်ခံသော အနဲဆုံး RAM size သည် 8GB ဖြစ်သည်။ RAM များလေသင့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေစေနိုင်လေဖြစ်သည့်အတွက် သင်တတ်နိုင်လျှင် RAM ကို 16GB ထိတိုးရန် အကြံပြုပါရစေ။
5. Storage Type and Capacity
SSD (Solid State Drive) သည်ပုံမှန် HDD (HardDisk Drive)များထက် သင့် Laptop Performance ကိုသိသိသာသာ တိုးတက်လာစေနိုင်သဖြင့် SSD ပါသော Laptop ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ရဲ့ဦးစားပေးစာရင်းထဲတွင် ထည့်သင့်ပါသည်။ OS booting တက်သည့်အချိန် ၊ Code တွေကို Compile လုပ်သည့်အချိန် ၊ App တွေ run သည့်အချိန် ၊ Project တွေ Loading ဆွဲသည့်အချိန်များတွင် SSD သည် ပုံမှန် HDD များထက်ပိုမြန်နေပါလိမ့်မည်။
သင့် Laptop ထဲတွင် အနဲဆုံး 256 GB လောက်ရှိသင့်သည်ဟုထင်မိပါသည်။ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ပါကလဲ 512 GB , 1TB လောက်ထိထည့်ချင်ကထည့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် 256 GB ထက်နဲပါက OS တို့ သင်အသုံးပြုသည့် Software တို့သည် သင့် SSD ၏ space အကုန်နီးပါးကိုသိမ်းထားလိမ့်မည်ဖြစ်သဖြင့် သင့်၏သီချင်း နှင့် ရုပ်ရှင်များ သည် External HDD ထဲတွင်သာ သိမ်းမှရလိမ့်တော့မည်ဖြစ်သည်။
သင့် Laptop ၏ Keyboard သည်သင့်အတွက် စာရိုက်ရအဆင်ပြေရေးကို ဦးစားပေးသင့်သည်။သင်မဝယ်ခင်ကတည်းက Keyboard layout ကို အကြိမ်ကြိမ်စမ်းရိုက်ကြည့်သင့်သည်။စာလုံး တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးကြား ရွှေ့ပြောင်းရိုက်ရတာ​ အဆင်ပြေရန်လိုအပ်လှပေသည်။ Keyboard တွင် မီးလင်းပါလျှင်လဲ သင်ညအမှောင်တွင် စာရိုက်ရလွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
မီးပလပ်ပေါက်နားမှာ အမြဲရှိနေနိုငရင်တော့ Laptop အားဘယ်လောက်ခံသည်က အရေးမကြီးပေမယ့် အနဲဆုံး ၆နာရီလောက်ခံသည့် Laptop မျိုးကိုရွေးဝယ်သင့်ပေသည်။အရေးကြီးသည်မှာ Manufacturer မှပြောသည့် အားဘယ်လောက်ခံသည်ကို မယုံကြည်ပဲ ထိုLaptop ကိုအမှန်တကယ်သုံးစွဲနေသော အသုံးပြုသူ၏ ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် အခြား Reviewer များ၏စမ်းသပ်ချက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးမှ ထို Laptop ၏အမှန်တကယ်အားခံနိုင်မှုကိုဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။
Operating System ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စရာ Laptop အနဲအများကွဲပြားနိုင်ပေသည်။Window OS သုံးပါက ရွေးချယ်စရာ Brand အများအပြားရှိပေမယ့် Mac OS သာသုံးချင်ပါက Apple products များကိုသာရွေးချယ်စရာရှိပေသည်။Linux OS သည် Laptop တော်တော်များများပေါ်မှာ Run နိုင်ပေမယ့် Linux OS သုံးမည်ဆိုပါက တရားဝင် Linux support ပေးသော Dell , System 76 ကဲ့သို့သော Linux OS ပါဝင်လာသော Brand မျိုးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်သည်။
9. Dedicated or Integrated Graphic
Dedicated graphics card ပါတာ programmer တွေအတွက်သိပ်အရေးမကြီးပေ Integrated graphics လောက်နဲ့လဲ အဆင်ပြေပြေ code ရေးနိုင်ပါသည်။ထို Dedicate graphics card အတွက်ကုန်မည့်အစား SSD နှင့် CPU တို့တွင်ပိုသုံးပါက သင့်အတွက်ပိုအကျိုးရှိပေလိမ့်မည်။
← Domain နှင့် Hosting ကို အလွယ်တကူဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ ... ? WordPress နှင့် Facebook Sharing အကြောင်း →
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Web Design ကောင်းတွေဖန်တီးဖို့ ဘာတွေလေ့လာရမလဲ
WordPress ထဲမှာFile size limit ဖြစ်နေလို့ တင်လို့မရတဲ့ Theme တွေ Plugin တွေကိုဘယ်လိုသွင်းမလဲ
WordPress နှင့် Facebook Sharing အကြောင်း
Domain နှင့် Hosting ကို အလွယ်တကူဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ … ?
Monarch Social Sharing Plugin ဖြင့် Social Sharing နှင့် Social Follow widget ထည့်သွင်းခြင်း
Divi plugins (1)
No 28 , 167th Street , Tamwe Township , Yangon.
09 431 15202 , 09 799 895096
Sunday ~ Saturday: 7:00AM–9:00PM
Copyright 2017 Active IT Class.